Vaovao - 20'FCL NCL dingana iray Crystallizer sy Bellinwax no tonga mpividy mpanjifa talohan'ny fetin'ny Muharram Festival.
Ny 20'FCL NCL dingana iray Crystallizer sy Bellinwax dia tonga mpividy mpanjifa talohan'ny fialantsasatra Muharram Festival.
Laboratoara simika nasionaly araka ny fantatsika ny NCL, hatramin'ny fiandohan'ny faran'ny taona 1940 dia nanamboatra savony sy shampoos ho an'ny orinasam-panambadiana hatsaran-tarehy ho an'ny fianakaviana, hatramin'ny anjara andraikitry ny mpitarika amin'ny sehatry ny fikojakojana ny fahasalamana amin'ny maha-mpanome marika feno, manerantany. Ny NCL dia manana foibe any Philadelphia, Pennsylvania, misy ivon-trano famokarana sy hetra an-tongotra antsasa-tapitrisa. Mampiasa reactors lehibe sy mahery vaika izy ireo amin'ny famokarana akora manta izay ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny vokatray. Miaraka amin'ny lisitra mitambatra maherin'ny 3 tapitrisa galona ny akora ary ny vokatra vita, ny tranon'ny NCL dia iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny karazany ao Etazonia. Ny laboratoara solosaina eo an-toerana, izay miasa ao dia misy mpahay simia fanta-daza eo amin'ny indostria, izay manampy amin'ny famolavolana famolavolana vokatra vaovao sy farany ary manome toky fa mifanaraka amin'ny fenitra mifehy ny fifehezana kalitao henjana ireo vokatra ireo.
Ny Laboratoara simika nasionaly dia misy ny rafitra fanadiovana sy fikojakojana feno manolotra ny tombony amin'ny fanomezana tokana ho an'ny zavatra simika fidiovana rehetra ataonao. Na gorodona azo iainana mafy, na vato voajanahary na fikarakarana taila tanimanga, fikarakarana karipetra, programa fanadiovana maintso, fidiovana fidiovana, fikolokoloana indostrialy, fivarotana lehibe na fivarotana sakafo, misy programa vokatra NCL natao hanamafisana ny fahombiazan'ny mpiasa sy hifehezana ny teti-bola fanadiovana.
Ny programa fikarakarana vato TM avy amin'ny laboratoara simika nasionaly dia vokatra iray izay nandalo fikarohana momba ny fikojakojana ny tany sy ny fivoaran'ny simika. Ahitana: dingana vita amin'ny famafazana kristaly sy poloney - rafitra natao hamoronana marbra gloss avo lenta, famirapiratana tsotra sy avo indrindra ho an'ny fikolokoloana vatosokay sy tany vato programa poloney - rafitra iray hanomezana gloss avo indrindra sy famerenana amin'ny laoniny ny fonosana granita rehetra vita amin'ny vokatra fikarakarana tile - fomba fikojakojana sy fiarovana tanteraka ny taila vita amin'ny vera sy tsy mirehitra, taila nohadina, taila saltillo, vato Mexico ary taila artifisialy hafa